"मेरो उचित नानी"। जीवनी Anastasia Zavorotnyuk
जहाँ मुख्य भूमिका Mariupol देहाती महिला खेल्छ जो एक पातलो कालो-haired सौन्दर्य, खेलिएको छ रूसी टिभी श्रृंखला "मेरो उचित नानी", धेरै। यो Anastasia Zavorotnyuk। जीवनी, व्यक्तिगत जीवन र पछिल्लो केही वर्ष प्रेस र दर्शकहरूलाई को scrutiny अन्तर्गत छन् अभिनेत्री को सफलता।
सत्य, कुनै एक रूसी सिनेमा यस्तो अभिनेत्री छ कि एक सानो पागल नानी बारेमा स्क्रीन राम्रो घर श्रृंखला सम्म थाह थियो। तर जीवनी Anastasia Zavorotnyuk पूर्ण बिभिन्न गरिएको हुन सक्छ।
बाल्यकाल र युवा अभिनेत्री
भविष्यमा तारा Astrakhan मा 1971 मा जन्म भएको थियो। यो अभिनेत्री दर्शक को परिवार मा अप्रिल 3, त्यहाँ थियो र टिभीमा निर्देशक अलि Nastya जन्म भएको थियो। उनको आमा Valentina Borisovna को सोभियत संघ को जनता कलाकार थियो, त्यसैले केटी तुरुन्तै रचनात्मक आमाबाबुको पाइला पछ्याए छ भने एक छक्क छैन। तर, त्यो गर्न दाखिल भएको थियो शैक्षणिक विश्वविद्यालय इतिहास विभाग मा, आफ्नो गृहनगर मा। अफवाह यो विकल्प मा कि छ यो उहाँले प्रेमी धक्का। को आसन्न विवाह बारे मा गपशप करते विपरीत, आफ्नो रोमान्स जारी प्राप्त गरेको छैन। यहाँ र अभिनेत्री रूपमा बन्द जीवनी Anastasia Zavorotnyuk तोड्न सक्छ: त्यो विश्वविद्यालय स्नातक र इतिहासकार भयो होला। तर के किस्मत छ - तपाईं उम्कन हुनेछ देखि छैन।
अभिनय क्यारियर बाटो
एक अभिनेत्री बन्न - पहिलो वर्ष पछि उनले मास्को गर्न बन्द उड्यो। यसको आशय बारेमा एकै समयमा मात्र म उसको पिता थाह थियो। मेरी आमा उनको छोरीले पुरातात्विक साइटमा गएका थिए कि लाग्यो।
पहिलो पटक देखि Anastasia Us | पनि मास्को कला थियेटर र Shchukin स्कूल प्रवेश। तर त्यो अध्ययन को पूर्व ठाउँ छनौट गरे। 1993 मा भाग Tabakov थियेटर अर्को अभिनेत्री थियो। त्यो मास्को कला थियेटर स्कूल को Anastasia Zavorotnyuk एक स्नातक भयो। जीवनी (उनको पहिलो चलचित्र "Masha" को जन्म साल - 1991), अभिनेत्री replenished प्रदर्शन र चलचित्रमा सानो भूमिकाको भयो।
लोकप्रियता केटी गर्न शो Alexei Kiryushchenko "मेरो उचित नानी" फिलिम पछि आए। यो व्यंग्यात्मक र राम्रो उत्पादन-haired सौन्दर्य एक शानदार मौका चलचित्र "Apocalypse कोड" मा भिन्सेन्नस Peres खेल्न थियो मार्फत यो छ।
व्यक्तिगत जीवन र रचनात्मक उपलब्धिहरू
जीवनी Anastasia Zavorotnyuk जीवन दुवै रूस, जर्मनी र संयुक्त राज्य अमेरिका मा घर मा चरणमा समावेश छ। एकै समयमा, अमेरिका बाँचुन्जेल पनि, अभिनेत्री "snuffbox" मनपर्ने थिएटर को निर्माण मा भाग। श्रीमान्सँगै, पहिलो "नानी" त्यहाँ भेट छ - skits को एक। जर्मन Olaf Shvartskopf रूसी जरा थियो। उहाँले पहिलो दृष्टि मा निष्पक्ष चमड़ी श्यामला प्रेम गरे र हाम्रो परिचय को चौथो दिन उनको प्रस्तावित। त्यसैले अभिनेत्री जर्मनी मा देखा छ। दिमित्री Stryukova - सान्त्वना र शान्ति फेला छैन, Zavorotnyuk त्यो उनको दोस्रो पति भेट कहाँ मास्को, फिर्ता भागे। एक केटी र एक केटा, माइकल, अन्ना - यो विवाहमा जोडी दुई बच्चाहरु संग देखियो। त्यतिबेला परिवार को Anastasia प्रदर्शन भाग लिन मास्को आए जहाँ अमेरिकी, बस्थे।
त्यसपछि त्यहाँ ", नानी" एक शानदार सफलता थियो र थिएटर भूल थियो। यस नाटकीय र चलचित्र: Anastasia Zavorotnyuk को रचनात्मक जीवनी स्पष्ट दुई अवधि विभाजित। यो मोड एक लोकप्रिय टिभी श्रृंखला थियो। केटी को आफ्नो शूटिंग मा भेट सर्गेई Zhigunov - र पारिवारिक जीवन दिमित्री Stryukova संकुचन। नव जोडी पहिले नै विवाह मिति योजना बनाए। तर टेलिभिजन परियोजनामा "आइस मा नृत्य", "आइस र ज्वाला" सहभागिता सबै कार्डहरू भ्रमित छ - अभिनेत्री Petrom Chernyshevym भेटे, र तेस्रो समय आधिकारिक विवाह गरे।
फिल्म "आमा", "गैर-आदर्श महिला", "कार्यालय रोमान्स: हाम्रो समय", र "Apocalypse कोड" अझै पनि को दर्शक छवि लापरवाह र पागल एडी बारेमा नानी विकी Prutkovskaya स्मृति मेटाउन छैन।
Tisha कैम्पबेल - टेलिभिजन र सिनेमा को प्रसिद्ध अभिनेत्री
"Sharpay गरेको Fabulous साहसिक": ठूलो बक्स कार्यालय वा नैतिकता?
कसरी स्वीकार गर्न: कसरी sacrament लागि तयार भन्न के?
तपाईंको स्मृति तालिम कसरी उपयोगी सुझावहरू
Ekaterina Lesina: रचनात्मक लेखक
र कसरी कहाँ वसन्त मा ब्रीम समातिए? पक्रने ब्रीम वसन्त लागि tackles
A3 फ्रेम: मूल्य। A3 फ्रेम: GOST
Snobbery - यो अवधारणा के हो?
साना व्यापार: सफल कारोबार उदाहरणहरू
रजोनिवृत्ति मा Punjabi - लागूऔषधको नयाँ पुस्ता: समीक्षा, सूची